people Nepal » अाजकाे राशिफल : असोज २८ गते / अक्टोबर १४ तारिख शनिवार अाजकाे राशिफल : असोज २८ गते / अक्टोबर १४ तारिख शनिवार – people Nepal
अाजकाे राशिफल : असोज २८ गते / अक्टोबर १४ तारिख शनिवार
Posted on October 14, 2017 by Durga Panta
अाजश्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल आश्विन २८ गते शनिबार इश्वी सन २०१७ अक्टोबर १४ तारीख कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथी चन्दमा कर्कट राशिमा सूर्य दक्षीणायन शरद ऋतु-
सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने योग रहेको छ । जिवन साथीको साथ सहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसाय उत्तम रहनेछ । आफ्न्तजन बिच कसैको स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ साथै मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ ।
नजिकका तथा बिश्वासिला साथी भाईहरुबाट सामान्य धोका दिएको महसुस हुनेछ । गरिरहेको कार्य सम्पादन गर्न आटँ र शाहसको कमी हुन सक्नेछ । अनावश्यक यात्राको सम्भावना रहेकोछ । अरुको कार्य त्रुटिको अपजस तपाईले भोग्नु पर्नाले मानसिक तनावको सामना गर्नु पर्न सक्नेछ ।
नयाँ लगानिका क्षेत्रमा समय उत्तम त्यति उत्तम रहेकोछैन । बाणीको गलत अर्थ लाग्न सक्नाले बोल्दा सजग रहनु उत्तम रहनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । हरकसैको पूर्ण रुपमा गरीएको बिश्वासमा समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । यात्रा कारक दिन रहेकोछ ।
दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खराब उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा सामान्य घाटा आईपर्न सक्नेछ । कामकाजमा सामान्य अबरोध उत्पन्न हुनाले मानसिक तनावको सामना गर्नुपर्ला । मनोरञ्जनका श्रोत साधनको खरीद तथा प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । आफ्न्त जनबाट धोका हुन सक्नेछ ।
परिवारका सदस्यहरु भन्दा टाढा हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । अनावश्यक खर्चका कारण तात्कालिन आर्थिक अभाव सृजना हुन सक्नेछ । प्रतिपक्षीहरु सबल रहनाले हरकदममा समालिनु पर्ने सम्भावना रहेकोछ । नयाँ कार्य योजनाका साथ कार्य प्रारम्भ गर्दा बिशेष लाभ प्राप्त हुन सक्नेछ ।
आम्दानिका बिभिन्न स्रोतहरु फेला पर्नाले मन प्रशन्न रहनेछ । दिदी बहिनीहरुको साथ सहयोगले दीगो फाईदा मुलक कार्यको थालनि होला । आक्स्मिक धनलाभको सम्भाबना रहेको छ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउला ।
भौतिक श्रोत साधको प्रयोमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भईनेछ । श्रम र मेहेनतको राम्रो कदर हुनेछ तथा मानसम्मान प्राप्त हुने समय रहेको छ । सन्तान शुख प्राप्त हुनेछ । बिद्यार्थी बर्गको बौधिक बिकाशका निम्ति समय राम्रो रहेको छ ।
तात्कालिन यात्राको सम्भाबना रहेकोले बिशेष सजग रहनु होला । बिशेष जिम्मेबारी बहन गनुपर्ने समय रहेको छ । ईष्ट मित्रजनको सहयोग प्राप्तहुनाले कार्य सहज रहला । मान्यजनको मार्गदर्शन अबलम्बन गर्नाले भाग्योदयको बाटो देखा पर्नेछ । आजको कार्यले भोलिलाई फाइदा रहनेछ
खान-पान सम्बन्धि समस्याले स्वास्थमा सामान्य बाधा आईपर्न सक्नेछ । मानसिक चन्चलताले कार्य क्षेत्रमा झन्झट उत्पन्न हुनेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलामा फस्न सकिने योग रहेकोले सजग रहनु होला । मनमा उत्पन्न बिभिन्न कुबिचारले समस्या निम्त्याउन सक्ला सजग रहनु पर्नेछ ।
दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखापर्नेछ । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहनेछ । तपाईको कार्य बाट फाईदा लिनेहरुको सङख्यामा बृद्दि हुनेछ । नया कार्य थालनि गर्ने अबसरहरु प्राप्त हुनेछन ।
आम्दानिका श्रोत मध्यम रहेता पनि मनमा चन्चलताले बास गर्नेछ । कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धिहरुको बृद्यिहुनाले तपाईलाई सामान्य झन्झट आईपर्ला निर्णय गर्न नसक्नाले आफ्नो कमजोरी महसुस हुनेछ । अरुको संगतगर्ने बानिले सामान्य समस्या आइपर्ला । कसैको बिश्वास नगरेकै बेश हुनेछ ।
बौद्दिक क्षेत्रका ब्यतित्व संगको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला । सन्तान शुख प्राप्त हुनेछ । आम्दानिका बिभिन्न स्रोत हरु फेला पर्ने छन । पठनपाठनको निम्ति भने समय त्यति उत्तम रहेकोछैन । गरिरहेको कार्य क्षेत्रमा मन चन्चल रहनाले अरु नयाँ काम को थालनि हुन सक्नेछ ।